I-kinetics yokufudumeza kokungeniswa kokucinywa kwensimbi
I-kinetics yokufudumeza kokungeniswa kokucinywa kwensimbi kuncike ezintweni: 1) ezenza ushintsho kumapharamitha kagesi namandla kazibuthe njengomphumela wokushisa okwandayo (lezi zinguquko ziholela ekuguqulweni kwenani lokushisa okumunciwe ngamandla anikezwe wensimu kagesi endaweni yamanje yokungeniswa) futhi, 2) ezintweni ezibhekene nokushintshwa kokuqina kwensimu ye-electromagnetic ngesikhathi sokushisa (isb., ushintsho lwamanje ku-inductor).
Lezi zinto zihlobene nokushintshwa kwamapharamitha we-inductors ngesikhathi sokushisa kwensimbi naku
izici zomklamo onikeziwe wezinsizakusebenza eziphakeme, okusho ukuthi, amandla asetshenzisiwe alawulwa ngesikhathi senqubo yokushisa. Ezimweni eziningi ubukhulu bensimu ye-elektromagnetic ye-inductor ayihlali ingaguquguquki ngesikhathi sokushisa, futhi lolu shintsho luthinta ukuma kwejika lesikhathi sokushisa.
Ukushisa ukushisa ekwelapheni ukushisa kwezingxenye zezimoto kwaqala ukusetshenziswa esitshalweni sethu. Ngo-1937-1938 ebusweni
ukucisha izintamo zemigede emincane yenjini yeZIS-5 yathuthukiswa embonini yethu ngokubambisana nabasebenzi
kwelabhorethri i-VP Vologdin. Imishini yafakwa njengengxenye yomugqa wokukhiqiza oqhubekayo, lapho
izingxenye zenzelwe ukwelashwa ngomshini kuzinsizakusebenza eziphakeme ezizenzakalelayo ezizenzekelayo. Ngaphezulu kwama-61% we
alt izingxenye zezinjini ze- ~ ae ZIL-164A ne-ZIL-157K zezimoto zinobunzima obenziwa ukufudumeza kokungeniswa.
Ukuqedwa kobuso bezingxenye zomshini ngemuva Ukushisa Ukushisa.
Ukushisa kwe-induction kusetshenziselwa kabanzi ukwelashwa komhlaba kwezingxenye.
Izigaba Ubuchwepheshe Amathegi Ukushisa ukufakelwa, indawo yokushisa engenayo, lokungeniswa eqeda heater, umshini wokuqeda ukukhipha, induction eqeda indawo, uhlelo lokucima lokungeniswa, ukuqedwa kobuso bokungeniswa, ukucima indawo, insimbi eqeda ubuso Imeyili kwemikhumbi